သက်တန့် တစ်ခုရဲ့ ရောင်စဉ်ငြိမ်း: October 2009
အလွမ်းမိုးဖျန်း ကမ်းရိုးတန်းသို့ 
ရှင်ဆံတော် (ကလိန်အောင်ဆံတော်ရှင် စေတီ)
" ထားဝယ် "ဆိုတာ
လောကကံတွာ လူတို့ ရွာမှာ
ရှာဖွေဝမ်းစာ အလိုငါလျှင် ခွဲခွာကြ၍ ပြန်မတွေ့ ကြ
နှစ်ကာလ ကြာညောင်း ရက်တွေပြောင်းခဲ့ အောက်မေ့ရုံသာရှိခဲ့၏. . . . . .။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 11:34 PM0comments
အလုပ်တစ်ခုကို တစ်ခါလုပ်တယ် နှစ်ခါလုပ်တယ် သုံးခါလုပ်တယ် ဥပမာပြောရယင် မနက်တိုင်းလဘက်ရည်အချိုသောက်တယ် နောက်ချွေတာရမယ့် အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံလို့ မသောက်ပဲနေကြည့်တယ် သူကိုစွဲလန်းနေမိတယ်၊ လဘက်ရည်အချိုမသောက်ရတဲ့နေ့ ဆိုယင် စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲ တစ်ခုခုလိုနေသလိုလဲထင်ရပါတယ်။
တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အကျင့်ပါ အကျင့်လုပ်ထားလို့ အကျင့်ဆိုတာ အစပထမကတော့ အပ်ချည်မျှင်လိုပါပဲ အားနဲ့ ဆွဲဖြတ်ယင် ပြတ်နိုင်ပါသေးတယ်၊ ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ သံကြိုးမျှင်လို ခိုင်မာသွားတက်ပါတယ် ၊ဖြတ်လို့ မရတော့ပါဘူး၊ ခဲယဉ်းသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဇွဲနဲ့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖြတ်ယင်ရနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့သိပ်စိတ်ပူတက်တယ်၊ စိုးရိမ်တက်တယ်၊ အထူးသဖြင့် သံယောဇဉ်အသိုင်းအဂိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လာယင် ခံစားမူပြဿနာတက်ပါလေရော သားသမီး သားမယားအပေါ်အစစ အရာရာ စိတ်မချနိုင်ပဲရှိနေတယ်တယ် ၊အိမ်မှာလူမစုံမချင်းလည်ပင်း တရှည်ရှည်ဖြစ်နေတက်ပါတယ်၊ အဲဒါဟာနေ့ စဉ်အလုပ်ပါပဲ။
ကြာတော့ပူရ စိုးရိမ်ရတဲ့ အလုပ်စာကိုယ့် အလုပ်မလုပ်ယင်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေမှာလဲ စိတ်အေးချမ်းသာမူဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ သူတို့ နဲ့ အပူဟာမီးနဲ့ မီးစာလိုပဲ ဒွန်တွဲနေပါတယ်၊ မီးမရှိလဲ မီးခြစ်နဲ့ ခြစ်ပြီးညှိလို့ ရတယ်၊ မီးစာကုန်လဲ အသစ်ထည့်ယင်ဖြစ်တယ်၊ဒါနဲ့ ပဲ အပူပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး၊ လူနဲ့ အပူဆိုတာကတော့ လုံးဝကင်းရိုးထုံးစံမရှိရိုးအမှန်ပါ၊ ဒါပေမယ့်အပူကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်တော့ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စိုးရိမ်ပူပန်မူတွေဟာ လူကို - - -
. . . . အသက်ကိုတိုစေပါတယ် ဒါကြောင့်နေပူတာမှမဟုတ် မီးအပူနားမှာ ကြာကြာမနေအပ်သလို စိုးရိမ်ပူပန်မူတွေကိုလဲ ကြာကြာမသိမ်းပိုက်ထားသင့်ပါဘူး။
. . . . ရုပ်ဆင်းပျက်ယွင်းမှေးမှိန်စေပါတယ်။
စိုးရိမ်ပူပန်မူတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ - - -
. . . . အချိန်တန်ကျယင် သူဟာသူပြီးသွားမယ့် အပူမျိုး
. . . . မိမိကကြံဖန်တွေးပြီး မဖြစ်သေးပဲ ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဖူးဆိုတာကို သေသေချာချာ မသိပဲအလကားနေယင်း ပူနေတဲ့အပူ
. . . . မိမိမဟုတ်မတရားလုပ်မှပေါ်ပေါက်မယ် အပူ(အသိတရားနဲ့ ရှောင်ယင်ငြိမ်းသွားမယ့်အပူ)စသည်ဖြင့်ဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်။
အသက်နဲ့ ခန္ဓာရတဲ့ သတ္တ၀ါမှန်သမျှ တိရိစ္ဆာန်ကအစ ပူမယ်ဆိုယင် ပူစရာတွေက ပတ်ချာဝိုင်းလို့ နေပါတယ်။
. . . . ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ နေရတဲ့ တိရိစ္ဆာန်သတ္တ၀ါတွေအဖို့ အချိန်မရွေး အပူရှပ်နိုင်တယ် အအေးမိနိုင်တယ်၊
. . . . စားစရာသောက်စရာ ရေရေရာရာ အာမခံချက်မရှိတဲ့အတွက် အချိန်မရွေးငတ်ပြီးသေနိုင်တယ်၊
. . . . လူအပါအ၀င်သတ္တ၀ါတွေရဲ့ နှလုံးခုန်မူဟာ စက်များလိုအချိ်န်မရွေး ရပ်သွားနိုင်ပါတယ် နှလုံးခုန်ရပ်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလေ့ရှိတယ်ဆဆိုတာ လူတိုင်း သိပြီးသားပါ၊
. . . .အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဒီနေ့ ကာလမှာ ယာဉ် ယန္တရားတွေရဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားမူ ဟာအထူးများပြားလှပါတယ်၊ လူတွေဟာ ဒီယန္တရားတွေ ပျားပန်းခတ်လှုပ်ရှားသွားလာ နေကြတဲ့ကြားကပဲဖြတ်သန်းသွားလာနေကြရပါတယ်၊ သူတို့ ကိုစီးနင်းပြီးခရီးဆက်နေကြရပါတယ်၊ ဒီတော့ယာဉ်တိုက်မိလို့ ပဲဖြစ်ပါစေ အဲဒီယာဉ်မှောက်လို့ ပဲဖြစ်စေ အချိ်န်မရွေးနေရာမရွေး သေစေနိုင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပေဘူးလား။ ဒါကြောင့်ပူတက်စိုးရိမ်တက်တဲ့ အလေ့အထဆိုးကလေးများ အစို့ အညှောက်ပေါက်နေခဲ့ယင် အမြန်သတ်ပစ်ပါ။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:27 PM0comments
အကျိုးတရားတိုင်းမှာ အကြောင်းတရားရှိစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနည်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရားရှိမှသာဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ လောကမှာ လူနည်းစုလောက်ကသာ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်တာကို တွေ့ ရပါတယ် ဒါဟာ
. . . .ပညာတက်လို့ လဲ မဟုတ်ဘူး၊
. . . .ပစ္စည်းရှိလို့ လဲ မဟုတ်ဘူး၊
. . . .ရာထူးကို လက်ညှိုးထိုးပြလို့ လဲ မဖြစ်ဘူး၊
. . . .နာမည်ကျော်ကြားခွင့်ရတာကိုလဲ မရည်ညွှန်းနိုင်ဘူး၊
. . . .ရုပ်ရည်ချောမောလှပတာကိုလဲ အကြောင်းမခံဘူး၊
ဒါဖြင့် ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ အဖြေရှာဖို့ ကတော့ မခတ်လှပါဘူး။ ခါတိုင်းထက်နည်းနည်းကလေးပိုပြီး စဉ်းစားကြည့်လိုက်ယင် အဖြေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လေးနက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ရစ်ပတ်ရှုတ်ထွေးနေတဲ့ အကြောင်းတရားကို ဆက်ပြီးသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါ လူတွေဟာ အများအားဖြင့် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ နဲ့ ယှဉ်တဲ့အသိအမြင်တွေနဲ့ သာ လှုပ်ရှားသွားလာလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ အတွက် အမှန်နဲ့ အမှားကို တိတိကျကျမသိပဲ ဖြစ်နေကြရပါတယ်။
တရားတာမတရားတာ အပထား မိမိအလိုဆန္နပြည့်ဝဖို့ အရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့ ခံယူတဲ့အချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်ဖို့ကိစ္စမှာ နက်နဲတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ လာပြီးရှုပ်ထွေးနေရပါတယ်၊ စင်စစ်တော့ မိမိတို့ လိုချင်တာရယင် စိတ်ချမ်းသလိမ့်မယ်လိုထင်တဲ့ အထင်ကိုက အရှုပ်အထွေးတရားအမှားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။
အမှားဆိုတာအမှောက်ဖြစ်ပါတယ်၊ အမှောင်ဆိုကတည်းက ပြဿနာတစ်ခုရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်၊ ယုတ်စွအဆုံးဘာပြဿနာမှ မရှိစေဦးတော့ သံသယမကင်းတဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့် စိတ်ကတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ဒီစိတ်ဟာ စိတ်အေးချမ်းသာမူကို လောင်မြိုက်တဲ့ အပူပဲ မဟုတ်ပါလား။
အခုတင်ပြခဲ့သလို လူတွေစိတ်ချမ်းသာမူကိုရှာပေမယ့် တွေ့ ရခဲ့တဲ့ မတွေ့ တဲ့အကြောင်းတရားတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမသိလို့အမှန်ကို ရှာမရပဲ အမှန်ခံစားမူကို နှလုံးမသွင်းနိုင်ကြောင်း တရားမှားကိုသွားတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်၊ ဒီအကြောင်းတရားအမှားကို အတက်နိုင်ဆုံး အမှန်ဖြစ်အောင်ပြင်နိုင်ယင် စိတ်ချမ်းသာမူကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် မခံစားရဘူးပဲထား သုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါးလောက်တော့ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 5:44 PM0comments
သက်ရှိသတ္တ၀ါမှန်သမျှ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေချင်ကြတာချည်းပါပဲ ရှာကြံစားသောက်တက်တဲ့လူထက်စာယင် ခွေး၊ ကျွဲ၊ နွား၊ စတဲ့သတ္တ၀ါတွေရဲ့ ဘ၀ဟာပင်ပန်းဆင်းရဲလှပါတယ်၊ ဆာလောင်နေပေမယ့်လဲ အသိတရားနဲ့ ယှဉ်ပြီး ရှာကြံစားသောက်နိုင်စွမ်းမရှိ သူတို့ တွေရှာကြံစားသောက်ပုံကလဲ မရေရာနိုင်လွန်းလှပါတယ်၊ အနံခံပြီး ဆင်ကန်းတောတိုး ကြံရရှာပေသကို။
ဒါပေမယ့် သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေအနေနဲ့ ဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့ အနှောက်အယှက်မရှိပဲ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ နေချင်ကြတဲ့ဆန္နကတော့ အသိတရားရှိတဲ့လူသတ္တ၀ါတွေနဲ့ အတူတူပဲလို့ ဆိုရပါမယ်၊ ဆိုကြပါစို့ ခွေးကတက်မှာ ဖြစ်သလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ကိုလေ့လာကြည့်ယင် ဒီခွေးဟာခွေးဆိုးတစ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုယင်
- - - လူတွေကအတက်အဆင်းမှာ ခလုတ်တိုက်သွားကြစေဦးတော့ အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်တိမ်းပြီး မိမိစိတ်ချမ်းသာသလို နေနိုင်အောင် နေနေတာကို တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- - - နောက်ဆုံးအနှောက်အယှက်များလွန်းယင် တစ်နေရာကိုရွေးပြီး မိမိဖာသာ မိမိပြန်ခွေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
- - - ဒါဟာမိမိရဲ့ ဘ၀အတွေ့ အကြုံကို တက်နိုင်သလောက်မှတ်သားပြီး မိမိဘေးမရှိပဲ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလူ့ ရဲ့ရှူဒေါင့်သုံးသပ်ပြီးပြောရယင်. . . .
. . . . . .မရှိလဲ အေးအေးဆေးဆေးပ
. . . . . . ဖြစ်နိုင်သလောက်တော့ စိတ်ချမ်းသာအောင် နေမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
ကဲ ဘယ်နဲ့ လဲ အသိတရားနည်းပါးတဲ့ ခွေးသတ္တ၀ါတောင် စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်သေးယင် နေတက်သေးယင် . . . . .။
ယဿနုဘာဝတော ယက္ခာ ၊
နေ၀ ဒေဿန္တိ ဘီသနံ။
သုခံ သုပတိ သုတ္တောစ ၊
ပါပံ ကိဥ္ဓိ နပဿတိ။
ယဿ ၊ အကြင် လူနတ်အများ တရားကျင့်ထုံး နှလုံးထဲသို ချစ်ကြည်ညိုစိမ့် သျှိုဂါထာအစစ် ရွှေနှုတ်တော်လှစ်အပ်သော မေတ္တာသုတ် ပရိတ်တော်၏။
အာနုဘာဝတော ၊ တန်ခိုးရှိန်ဓော် အာနုဘော်ကြောင့် ။
ဘီသနံ ၊ ရူပ သဒ္ဒ စသည်အဖုံဖုံ ကြောက်မက်ဖွယ်သော အာရုံကို။
နေ၀ဒေဿန္တိ ၊ မပြ၀ံ့ကြကုန်။
ယဥိုစေ၀ ၊ အကြင်မေတ္တသုတ် ရွှေနှုတ်မြွှက်ဖော် ပရိတ်တော်ကို လျှင်။
အတန္ဒိတော ၊ မပျင်းမရိ လုံးလရှိသည်ဖြစ်၍။
ရတ္တိံစ ၊ ညဉ့်၌လည်းကောင်း။
ဒိဝါစ ၊ နေ့ ၌လည်းကောင်း။
အနုယုဉ္ဇန္တော ၊ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ရွတ်အံသရဇ္ဓုယ်လျက်။
သုတ္တော ၊ အိပ်သောသူသည်။
သုခံ ၊ မပင်မပန်း ချမ်းချမ်းသာသာ။
သုပတိ ၊ အိပ်ရ၏။
ကိဥ္ဇိ ၊ တစ်စုံတစ်ခုသော။
ပါပံ ၊ ယုတ်မာဆိုးကောင်း မကောင်းသောအိပ်မက်ကိုလည်း။
နပဿတိ ၊ မမြင်မက်။
ဧ၀မာဒိဂုဏူပေတံ ၊ ဤသို့ စသော ၀ိသေသဂုဏ်ကျေးဇူးနှင့်ပြည့်စုံသော။
တံပရိတ္တံ ၊ ထိုမေတ္တ သုတ် ရွှေနှုတ်မြွှက်ဖော် ပရိတ်တော်ကို။
ဟေ ၊ သီတင်းသုံးဖော် သမဂ္ဂပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ ။
မယံ ၊ ငါတို့ သည်။
ဘဏာမ ၊ သဒ္ဒါမပျက် အနက်မမှား မြတ်တရားကို ထပ်ပွားအာရုံ ရွှတ်ဖတ်သရဇ္ဇျာယ်ကြပါကုန်စို့ ။
ယဿနုဘာဝတော ယက္ခာ -နေ၀ ဒေဿန္တိ ဘီသနံ ။ ယဥိုစေ၀ါနုယုဉ္ဇန္တော၊ ရတ္တိန္ဒိ၀ မတန္ဒိတော။
သုခံ သုပတိ သုတ္တော စ၊ ပါပံ ကိဥ္စိ နပဿတိ။ ဧ၀မာဒိ ဂုဏူပေတံ၊ ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
ကရဏီယ မတ္တကုသလေန၊ ယန္တ သန္တံ ပဒံ အဘိသမေစ္စ။ သက္ကော ဥဇူ စ သုဟုဇူစ၊ သုဝစော စဿ မုဒု
သန္တုဿကော စ သုဘရောစ၊ အပ္ပကိစ္စော စ သလ္လဟုက ၀ုတ္တိ။ သန္တိနြ္ဒိယော စ နိပကော စ၊ အပ္ပဂဗ္ဘော ကုလေသွ
န စ ခုဒ္ဒ မာစရေ ကိဥ္စိ ၊ ယေန ၀ိညူ ပရေ ဥပ၀ဒေယျုံ။ သုခိနော ၀ ခေမိနော ဟောန္တု၊ သဗ္ဗသတ္တာ ဘ၀န္တု
ယေ ကေစိ ပါဏဘူတတ္တိ၊ တသာ ၀ါ ထာဝရာ ၀ န၀သေသာ။ ဒီဃာ ၀ါ ယေ ၀ မဟန္တာ၊ မဇ္စိုမာ ရဿကာ
ဒိဋ္ဌာ ၀ါ ယေ ၀ အဒိဋ္ဌာ၊ ယေ ၀ ဒူရေ ၀သန္တိ အ၀ိဒူရေ။ ဘူတာ ၀ သမ္ဘဝေသီ ၀ ၊ သဗ္ဗသတ္တာ ဘ၀န္တု သုခိတတ္တာ။
န ပရော ပရံ နိကုဗ္ဗေထ၊ နာတိမညေထ ကတ္ထစိ န ကဥ္စိ။ ဗျာရောသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညဿ ဒုက္ခမိစ္ဆေယျ။
မာတာ ယထာ နိယံပုတ္တ -မာယုသာ ဧကပုတ္တ မနုရက္ခေ။ ဧ၀မ္ပိ သဗ္ဗဘူတေသု၊ မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။
မေတ္တဉ္စ သဗ္ဗလောက သ္မိ၊ မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။ ဥဒ္ဓံ အဓော စ တိရိယဉ္စ၊ အသမ္ပာဓံ အဝေရ မသပတ္တံ။
တိဋ္ဌံ စရံ နိသိန္နေ ၀၊ သယာနာ ယာဝတောဿဝိတမိဒ္ဓေါ ။ ဧတံ သတိံအဓိဋ္ဌေယျ ၊ ဗြဟ္မမေတံ ၀ိဟာရ မိဓ
ဒိဋ္ဌိဉ္စ အနုပဂ္ဂမ္မ၊ သိလ၀ါ ဒဿနေန သမ္ပန္နော။ ကာမေသု ၀ိနယ ဂေဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂ္ဂဗ္ဘသေယျ ပုန ရေတိ။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:31 PM0comments
DးDECENT ရည်မွန်သောအမူအကျင့် ရှိသော
AးACTIVE ထကြွနိုးကြား သွတ်လက်ဖျက်လတ်သော
WးWISE ဥာဏ်ပညာအမြော်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော
EးENTHUSIASTIC စိတ်အားထက်သန်လုံးလရှိသော
IးINNOVATIVE တီထွင်ကြံဆ ဥာဏ်ရှိသော
ယခင်က TAVOY လို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒါက
TးTACTFUL လိမ္မာပါးနပ်သော
AးADORABLE ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသော
VးVALIANT ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသော
OးOPTIMISTIC အကောင်းမြင်တက်သော
YးYOUNGISH ဖျတ်လတ်တက်ကြွသော
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 4:42 AM0comments
ပြောသင့်တာလေးတစ်ခု ပြောချင်လို့ ပြောရဦးမယ်။ ထားဝယ်သူ ၊ ထားဝယ်သား များဟာဆိုရင်အလွန်ပဲ
စေတနာတရားကောင်းကြပါတယ် မေတ္တာဖြူစင်စွာ ပေါင်းသင်းခင်မင် ဆက်ဆံတက်ပြီး အသည်းဖြူအူစင်း
သူများဖြစ်တယ် ။ မြန်မာများကို " ဂံသား "ဟု ချစ်စဖွယ်ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိပြီး (ဂံသား ဟူသည် ပုဂံ သားဟု
အဓိပ္ပာယ်ရ၍ မြန့် မာ့ယဉ်ကျေးမူနှင့် လိုက်ဖက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါသည်)
ယနေ့ လူအများ စကားပုံနှိုင်း၍ ပြောဆိုနေမူတွင် ဘ၀င်မကျမလိုလားအပ်သော စကားတစ်ခုကိုတွေ
့ရပါလိမ့်မယ်။ " ထားဝယ်ရိုး ကြက်သူခိုး" ဟူ၍ ထားဝယ်သား များကိုနှိမ်ထားသောယုတ္တိမဲ့သော စကားဖြစ်၍
အလွန်လွဲမှားနေသော ချစ်ကြည်ရေးမိတ်ဖျက်စကားဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ . . . . . . . . . . .
ထားဝယ် ရိုးရာတွင် ကြက်ရိုးဗေဒင်တွက်ခြင်း ၊ရောဂါကုခြင်း (တောရွာအချို့ တွင်သာရှိတက်-
ယခုခေတ်မရှိတော့ပါ)။ " ထားဝယ် ရိုးကြက်ကိုး " (၀ါ) ကြက်သူခိုးမဟုတ်ပါ။ ဆင်ခြင်သင့်ပါသည်။ နောက်တစ်ခ
ု " ရှမ်းရိုးကိုးလင်တဲ့ " ရှမ်းမများ လင်ကိုးလင်ယူသည့် အဓိပ္ပာယ်ရောက်နေသည်။ အမှန်မှာ . . . . . . . .
ရှမ်းအမျိုးသမီးများသသည် ခင်ပွန်းလင်ကို အိမ်ဦးခန်းတွင်ထား၍
ကိုးကွယ်ချစ်ခင်ပေါင်းသင်းတက်သည်ဟူသောသဘောကို ထပ်ဟပ်ပြောဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လင်ကိုးလင်
ယူခြင်းမဟုတ်ပါ။ အများစကားကို တရားစကားဟုမယူမှတ်ဘဲ သံသယကိုရှောင်၍ မှန်သမျှကိုထူထောင်ပြီး
ပြောဆိုကျင့်သုံးကြပါဟု သတိပေး၍ ပြောချင်တာလေးကို ရေးလိုက်ရပါသည်။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 12:46 AM0comments
. . . ရှင်ဓာတ်ဝဲ စေတီ . . .
ထားဝယ်မြို့ မှ မြောက်ဘက် ထားဝယ်-ရေးမြို့ သွားကားလမ်း ၇မိုင်ခန့် တွင်တည်ရှိသည်။ ထားဝယ်ရာဇ၀င်မှ
ငါးခုံးမကမွေးသည့် ရှင်ဇော ၊ ရှင်ဇံ မောင်နှမသည် မြတ်စွာဘုရား၏ ဓာတ်တော်ကို ရဟန္တာအရှင်မြတ်ထံမှ
ရကြရာ ရှင်ဇံရသည့် ဓာတ်တော်ကို ဘုရားတည်ရန် အဓိဋ္ဌာန်ဖြင့်လွှတ်ရာ ဓာတ်တော်ပျံဝဲလျက် တည်နေရာတွင်
စေတီတည်၍ ဓာတ်တော်ဝဲသည်ကို အစွဲပြု ပြီး ရှင်ဓာတ်ဝဲ ဘုရားဟု တွင်သည်။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 12:22 AM0comments
. . . ရှင်သလွန် စေတီ . . .
အေဒီ ၇၈၈ တွင် သာဂရဘုရင် သမန္တမင်းက မြတ်စွာဘုရား၏ သလွန်တော်( သီဟိုဠ်ကျွန်းမှ ရရှိသည့် စမ္မပဏ္ဏာ
) ကိုဌာပနာ၍ ဘုရားတည်သဖြင့် ရှင်သလွန်စေတီဟု တွင်သည်။ ၄င်းစေတီဟောင်းနေရာတွင် သမန္တမင်းကို
ဆက်ခံသည့် ရှင်ဇံ (သမ္ဗန်မင်း)၏ နှမရှင်ဇော ဆိုသူက ထပ်မံဌာပနာပြီး စေတီတည်သည်။
ရှင်သလွန်စေတီခေါ်ရာမှ ရှင်ဇလွန်ဖြစ်လာသည်ဆိုသည်။ ထားဝယ်မြို့ မှ ၇ မိုင်ခန့် အကွာလောင်းလုံးမြို
့နယ်အတွင်း မြို့ ဟောင်းရွာ (သာဂရမြို့ )တွင်တည်ရှိသည်။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 12:14 AM0comments
. . . ရှင်ဆံတော် . . .(ကလိန်အောင်ဆံတော်ရှင်စေတီ)
ထားဝယ်မြို့ မြောက်ဘက် ၄၇ မိုင်အကွာ ထားဝယ်- ရေး မော်တော်ကားလမ်းပေါ်ရှိ ကလိန်အောင်ရွာကြီး
အနောက်ဘက် ထားဝယ်မြစ်ကမ်းဘေး တောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ၁၁ ၀ါမြောက်တွင်
ဥတ္တရကုရုမှ ဆွမ်းခံတော်မူပြီးအပြန် ဝေမိဿက တောင်အရောက်တွင် ဂ၀ံပတေ့ရသေ့၊ ဒူရက နတ်သား၊
ဂုမ္ဘဏ္ဏနတ်ဘီးလူးတို့ နှင့် ကြုံကြိုက်၍ ဘုရားရှင်က ဆံတော်သုံးဆူ သနားတော်မူသည်။ ရသေ့ ၊ နတ်သား ၊
ဘီးလူးတို့ သည် ဝေသာဝဏ္ဏတောင်ကုန်း၌ ရှေးဘုရားသုံးဆူတို့ ၏ ဆံတော်မြတ်များနှင့်အတူ ဂေါတမဘုရား၏
ဆံတော်သုံးဆူကို ဌာပနာ၍ မူလစေတီကို တည်ခဲ့လေသည်။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 11:57 PM0comments
. . . . ရှင်ဥသြ ဘုရား . . .
ထားဝယ်မြို့ ပေါ် ရွှေကျောင်းကြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ တည်ရှိသည်။ ထားဝယ်မြို
့ရွှေတောင်စားစေတီတော် ဒါယကာမင်းရှင်ဇော်သည် သက္ကရာဇ် ၁၁၂၂ ခုနှစ်တွင် ပိန္ဒဲတောရပ် ရွှေကျောင်းကြီး
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနေရာ၌ နန်းတော်တည်ဆောက်ကာ နန်းစံသည်။ ရွှေတောင်စားမင်းဟုလည်း
အမည်တွင်သည်။ နန်းတော်နှင့် တပြိုင်တည်း နန်းဦးဘုရားကိုတည်၍ ရှင်ဥသြဟု ဘွဲ့တော်သသည်။
. . . ရှင်တောက်ထိန် စေတီ . . .
ထားဝယ်ခရိုင်၊ လောင်းလုံးမြို့ နယ်၊ ကမျောကင်းရွာတွင် တည်ရှိသည်။ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ်တွင်၊
ဦးဖိုးတုတ်၊ ဒေါ်စောသီး ဇနီးမောင်နှံသည် တောင်ယာလုပ်ရန် မြေတူးဆွရာမှ ပေါ်ထွက်လာသော
ပေါ်တော်မူရှပ်ပွားတော်မြတ် ဖြစ်သည်။ ၁၂၉၅ ခုနှစ်တွင် ၄င်းရွာမှ ဦးကျံ ၊ ဒေါ်မြ တို့ ကရုပ်ပွားတော်စံမြန်ရာ
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 11:39 PM0comments
. . .ရှင်မျှော်တောင် စေတီ . . .
ထားဝယ်မြို့ မှမိုင် ၃၀၀ ကျော်ရှိသော ကျောက်ဝပ်ပြင်ရွာနှင့် ကျောက်နီးမော်ရွာ(လောင်းလုံမြို့ နယ်)သို့ သွား၍
ထိုမှတစ်ဆင့် စက်လှေဖြင့်ကူးကာ ကြက်လွှတ်ရွာမှ တောင်ပေါ်ခရီး ၃ မိုင်ခန်
့တက်လျှင်ရှင်မျှော်တောင်စေတီသို့ရောက်သည်။ ဂေါတမဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်တော်မူပြီးနောက်
ဘောဂ၀တီ နဂါးပြည်၌ ကိုးကွယ်ထားသော လက်ယာအံတော်ကို နဂါးမင်းကြီး၏ တူတော်နဂါးစစ်သူကြီး
၀သုလဒေ၀သည် နဂါးမင်းပြည်မှ ယူဆောင်လာပြီး ရှင်မျှော်တောင်(ထိုအချိန်က သိန္ဒုသေလာတောင်) ရှိ
လင်းလွန်းပင် ခွကြားတွင် ၀ှက်၍ တိတ်တဆိတ်ကိုးကွယ်နေသည်။ တနသာင်္ရီတိုင်း ကောရမ္ဘမင်းနှင့်
အောင်သာဝတီမှ ဓမ္မသေနာမင်းတို့ ၏ ဆန္ဒအရ ဘောဂ၀တီနဂါးမင်းကြီး နှင့် နဂါးစစ်သူကြီးတို
့လက်ခံသဘောတူ၍ အံတော်မြတ်ကိုဌာပနာပြီး စေတီတည်ကြသည်။ သာသနာတော် နှစ် ၂၃၈၊
တပေါင်းလပြည့်နေ့ တွင် ဘုရားတည်သည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 11:25 PM0comments
" ရှင်တောင့်ပုံ စေတီ ". . . ထားဝယ်ခရိုင် ၊ သရက်ချောင်းမြို့ မြို့ လယ်ရှိရှင်တောင့်ပုံတောင်ပေါ်တွင်
တည်ရှိသည်။ ထားဝယ်ရာဇ၀င်အရ ဘူမိဒေ၀နာဂရမြို့ရန္တပိုမင်း၏ မိဖုရားကြီး စုမဒ္ဒိဒေ၀ီက ရွှေအဆင်းရှိသော
ဥဒေါင်းကို အလိုရှိ၍ ဖမ်းခိုင်းသဖြင့် မုဆိုးမောင်နွား ဆိုသူသည် ဒေါင်းဖမ်းထွက်သည်။ ယခု သရက်ချောင်းမြို
့အနီးတောင်ပေါ်တွင် ဂီရိပစ္စယရသေ့ကြီးနှင့် မောင်နွားတွေ့ ၍ ရသေ့က တရားဓမ္မဟောပြသဖြင့် တရားရကာ
မောင်နွားရသေ့ဝတ်သည်။ ဂေါဝိန္ဒရသေ့ဟု အမည်တွင်သည်။ မုဆိုးမောင်နွား ဘ၀က အသုံးအဆောင်
လက်နက်ကိရိယာ ထည့်သောတောင့်၊ ပလုံး တို့ ကို မီးပုံ၍ ရှို့ သောနေရာ၌ အထိမ်းအမှတ်စေတီတည်ရာ
ရှင်တောင့်ပုံ စေတီဟုတွင်သည်။ ရှင်အဓိပ္ပာယ်မှာ ဘုရားဟူ၍လည်းကောင်း၊ တောင့် (ပေါရဏ)မြားပုံ၊
မြားကျည်တောက်ဟူ၍လည်းကောင်း အဓိပ္ပာယ်ရသည်ဆိုရာ ရှင်တောင့်ပုံစေတီဆိုရာ၌
မြားကျည်တောက်များစုပုံရာ ဘုရားစေတီဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
တောပေါင်၊ တောပေါင်၊ ရှင်တောပေါင်
တောပေါင်ပေါင်၊ မတ်စော့၊ တပ်မရော့
(တောပေါင်) ၂ ရွှေဖလားန ပူဇော်ပါလေ
နို့ နော်ဝေး နို့ မယ်ဝေး မ၀ါလွန်းဇလေ
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 11:10 PM0comments
. . . . . ရှင်ပင်ခရု စေတီ . . .
ရှင်ပင်ခရုဘုရားသည် ထားဝယ်မြို့ ပေါ် ကရပ်ပြင်ရပ်တွင်ရှိသည်။ ဘုရားတည်ရှိသော နေရာတွင်
ထားဝယ်အခေါ်ရှားပင် " ခရေပင်" နှစ်ပင်ပေါက်ရောက် စည်ပင်ခဲ့ရာ ထိုခရေပင်နှစ်ပင်အလယ်တွင်
အလွန်ကြီးသော ခရုကြီးတစ်ကောင် ပေါ်လာရာမှ ခရုခွံပေါ်တွင် စေတီတည်ခဲ့သည်။ " ရှားပင် ( ခရေပင် )
နှစ်ပင်နှင့် ခရုပေါ်မှ ဘုရား " ဟူ၍ " ရှားပင်ခရုဘုရား "ဟုခေါ်ရာမှ ရှင်ပင်ခရုဘုရား အမည်တွင်လာသည်ဟု
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 10:46 PM0comments
ကာလရှည်စွာ မက်ခဲ့မိ ။
* ကိုလေးတို့ မောင်းမကန် . . . . . နဲ့ 
မောင်းမကန် ကေသီဦး . . . . . . . တဲ့
ပျိုမြစ်ရွယ်လူး ၊ ဘ၀ဦး . . . . . . . က
ကြည်နှူးဖွယ်တေးတွေ . . . . . . . . . .
ရင်မှာဝေမြဲ ၊ ပျံ့လွင့်ဆဲမို့။
* မောင်းမကန်ဆီသို့ 
အကြောင်းဖန်လို့ ဝေး ၊ မရောက်သေးလည်း
အေးမြဆိပ်သာ ၊ ပင်လယ်ပြာနှင့်
သဲသာသည့်လမ်း ၊ စိတ်ကမှန်း၍
လွမ်းမိနေလျက် ၊ ယနေ့ ထက်တိုင်
အိပ်မက်မက်ဆဲ ၊ တမ်းတမြဲပါ ။
မောင်မဂန်မှာ လှိုင်းလုံးကီး၊ လိုက်စီးပါလားမီး၊ စီးလိုဝရှင် (ရတယ်ရှင်---ရတယ်ရှင်)
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 10:00 PM0comments
မြန်မာ----- --------- ထားဝယ်
ကုလား- -- လား
ငပိတို့့စရာ----- ပိတို့့စာ
တံတား ------------ ခါး
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 8:44 AM0comments
* အမေ့မျက်နှာ ၊ ဇရာရိပ် ......
* ဘ၀ရေး ထိုထို
* အမေ့ မနီသဿီမှာလ
ယှက်သီတဲ့ ခန္တီ အစွမ်းကြောင့်
ကြမ်းပေမယ့် နှလုံးသွေး မပျက်ခဲ့ပါဘု
အပြုံးကလေး စွက်ပါလို့ 
သတိခြုံ အသိအတွေး အဖုံဖုံနဲ့ 
မဖြုံပေါင် ဘ၀အတွေ့ ကိုဖြင့်
ငွေ့ ငွေ့ မငြီး။ ။
ဘုရားရိပ် ၊ တရားရိပ်ပြီးလျှင်
အမိကို လက်ယာပခုံး တစ်ဖက်၊
နေ့ စဉ်လုပ်ကျွေး ပြုစုတာတောင်မှ
မိဘကို မလုပ်ကျွေးသော သူသာငရဲကြီးမည်။
သားသမီးတို့လက်ဖြစ်သည်။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:52 AM0comments
Labels: အအေးမြဆုံး အရိပ်ကို တမ်းတနေဆဲ
ထေရီမလေးဖြစ်နေတဲ့ သုဘာကုမာရီ ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့ လိုက်တာနဲ့ထိန့် လန့် အံ့သြတဲ့အမူအရာနဲ
့ရေရွတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်ဟာ မထိမရိအပြုံးနဲ့ ကြည့်ရင်း ခြောက်ခြောက်သွေ့ သွေ့ ရယ်လိုက်သည်။"အဟဲ
......ဟဲ....မမှတ်မိဘူးလား ကုမာရီ၊ ကျုပ်ရာဓ၀လေ ...."
'' မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ရာဓ၀၊ ကျုပ်ဟာ ကုမာရီမဟုတ်တော့ဘူး။ ဘုရားသမီးတော် ထေရီဖြစ်နေပါပြီ "
ဘုဘာကုမာရီဟာ က္ကုနြေ္ဒကို ထိန်းပြီး တိုးညင်းတဲ့အသံနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ သစ်ခေါက်ဆိုး သင်္ကန်းဝတ်ရုံထားတဲ့
ကုမာရီဟာ ၀တ်စားဆင်ယဉ်ပုံ၊ နေထိုင်ပုံ၊ ပြောပုံ တည်ငြိမ်သွားတာကလွဲပြီး ကျုပ်စိတ်ထဲ ပြောင်းလဲမသွားဘူး။
အလှအပ မခြယ်သလို သစ်လွင်တောက်ပမူ မရှိပေမယ့် ကုမာရီဟာ ကျုပ်ရင်ထဲမှာ သစ်လွင်ဆဲ၊ လတ်ဆတ်ဆဲ၊
" ဟို .........ဟိုဒင်း တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ကုမာရီစိတ်ဆင်းရဲအောင် ဘယ်တုန်းကမှ မကြံစည်ခဲ့ပါဘူး "
" ဒါဆိုလဲ လမ်းဖယ်ပေးပါ၊ ငါသွးပါရစေ "
ရှေ့ က ပိတ်ဆီးရပ်နေတဲ့ ကျူပ်ကို လမ်းဖယ်ပေးဖို့ ကုမာရီတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ ကျူပ်ရင်ထဲက
ကျိတ်ပြုံးလိုက်မိတယ်။ ဘယ်ကလာ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံမလဲ။ နှောက်ယှက်မယ့်သူ ကင်းတဲ့
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ နှစ်ယောက်တည်း ဆုံစည်းဖို့ ဆိုတာက လွယ်လား.........။
ဆရာဇီဝကရဲ့ သရက်ဥယျာဉ်က ရာဇာဂြိုလ်နဲ့အလှမ်းဝေးတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံအကြောင်းနဲ
့မလာတက်ကြတော့ လူစိမ်းဆိုတာ ဘယ်ရှိမလဲ။ သာသနာဝန်ထမ်းရဟန်းတွေနဲ့ဘိက္ခူနီမတွေသာ ပျော်မွေ
့တဲ့အရပ်ဆိုတော့ ကိုယ့်တရားနဲ့ ကိုယ်အာရုံစိုက်နေတော့ ကျူပ်လို အကြံသမားအတွက်
လူဘောင်လောကီကိုစွန့် ခွာပြီး ဘိက္ခုနီလုပ်သွားတဲ့ သုဘာကုမာရီကို ကျုပ်မပစ်ရက်ဘူး။
အကြောင်းမဲ့သက်သက် မိန်မသား ဘ၀ ဖျက်ဆီးပစ်မှာကို မလိုလားဘူး။
ဖြစ်နိုင်ရင်လောကီဘောင်ထဲပြန်ဆွဲသွင်းချင်တယ်။ ကျူပ်နဲ့သူဟာ ကာမစည်းစိမ်အပြည့်အ၀ခံစားပြီး သားတွေ၊
သမီးတွေနဲ့နေချင်တယ်။ ဒါက ကျုပ်ရဲ့ တစ်ဖက်သတ်အတွေး။ ကျုပ်ရဲ့ ဆန္ဒ။
မှန်တာပြောရရင် သုဘာကုမာရီကို လိုချင်သူတွေက အမြောက်အများပါ။ ရာဇဂြိုလ်ပြည်က
မဟာသာလပုဏ္ဏားကြီးရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီး၊ ဆွေကြီး မျိုးကြီး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံသူ။ ဒီလိုအရှိန်အ၀ါ
အကျော်အစောရှိတဲ့အပြင် ကောင်းခြင်းငါးဖြာနဲ့ညီညွတ်အောင်ချောသူ ဆိုတော့ လိုချင်သူတွေ
သုဘာကုမာရီကို စုံမက်သူတွေထဲမှာ မင်းညီမင်းသားတွေပါတယ်။ အရာရှိ၊ အရာခံတွေပါတယ်။ သူဌေး၊
သူကြွယ်တွေပါတယ်။ တစ်ကယ့် ထိတ်ထိတ်ကြဲတွေပါ။အဲဒီထဲမှာ ကျုပ်လိုဟစုန်းပြူးကောင်ကလည်း
ကပ်ပါသေး။ အရာရှိ၊ အရာခံတွေထဲကျုပ်ကမျက်နှာမွဲ ပေမယ့် သုဘာကုမာရီအပေါ် ချစ်တဲ့စိတ်က မနည်းပါဘူး။
တခြားသူတွေ ထက်တောင် ပိုလွန်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သုဘာကုမာရီကတော့ ကျုပ်ကို ယုံမှာမဟုတ်ဘူး။
အင်း. .....ဒါကလည်းသဘာဝကျပါတယ် .......။ကျုပ်ကလည်း ကျုပ်ပဲလေ ............။
ကျုပ်အဖေက ဘုရင့်တော်ဝင် ပန်းတိမ်ဆရာ။ မင်းမိဖုရားတွေရဲ့ အသုံးအဆောင်၊
လက်ဝတ်တန်ဆာတွေလုပ်ရသူ။ ကျုပ်အဖေ ရာဝ ဆိုရင် တစ်နန်းတော်လုံး မသိသူမရှိဘူး။
မင်းဝတ်တန်ဆာဖြစ်တဲ့ ဦးသျှောင်၊ သရဖူ၊ မကိုဋ်၊ စလွယ်ကစပြီး လက်ဝတ်တန်ဆာတွေလုပ်ရတာဆိုတော့
မင်းပေါက်စိုးပေါက်။ အဲလိုဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်းက မွေတဲ့အပြင် ရုပ်ရည် ရူပကာက မိန်းမသားတွေ
စွဲမက်လောက်တဲ့ အဆင်းရှိတော့......အဟင်း၊ အားမနာတမ်းပြောရရင် ကျုပ်ဟာ က္ကုတ္တိသိုက်သမားဖြစ်ခဲ့တယ်။
ငွေနဲ့ ပြပြီးအချောအလှလေးတွေမြူဆွယ်တယ်။ ရုပ်နဲ့ ဖြားယောင်းပြီး မိန်းမလှလေးတွေ ဖျက်ဆီးတယ်။
တန်ဖိုးမရှောင် စားမ မရှောင် ဆိုသလို ပျိုသော၊ အိုသော စည်းမစောင့်ပဲ ကာမ၀တ်ရည်သောက်သုံးခဲ့တယ်။
ကျုပ်အကျင့်၊ ကျုပ်စရိုက်ကြောင့် သူတို့ တစ်တွေက က္ကုတ္တိဓုတ္တ လို့ တောင်ခေါ်ကြတယ်လေ ....။
အင်း ...........ထားပါ။ ဒါက အရေးအရာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကယ်တမ်းဖြစ်နေတာက ကျုပ် သုဘာကုမာရီကို
စွဲလမ်းနေတာပဲ။ သူလေးကိုတော့ ကျုပ်နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်တာပါ။ ကြောရုံတင် ကြံချင်တဲ့စိတ်ထား
အမှန်မရှိပါဘူး။ ရင်ကိုအပ်၊ အသည်းချင်းထပ်နေလိုတဲ့ စိတ်ရှိလို့သုဘာကုမာရီကို ချစ်ကြောင်းဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။
ကျုပ်စကားကြားတော့ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ခေါင်းခါရမ်းတယ်။ အိမ်ထောင်သားမွေးတဲ့ ဘ၀ကို ငါရွံရှာတယ် ရာဓ၀
.....စိတ်ကူးမယဉ်ပါနဲ့ လို့ရေပိတ်စကားဖြေခဲ့တယ်။ သုဘာကုမာရီ စကားကို ကျုပ်လက်မခံချင်ဘူး။
မှန်ရာပြောရင် ရာထူး၊ ဂုဏ်ရှိန်မရှိလို့ငြင်းပယ်တာ .......မင်းညီမင်းသားကသာ လက်ကမ်းရင်
ခေါင်းညိတ်မှာလားလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် နွားပိန်တွယ်သလို အတင်းတွယ်ကပ်မိတယ် ။ ကလေးနို
့ပူဆာသလို တကျီကျီပူဆာမိတယ်။ အဲဒီတုန်းမှာပဲ သုဘာကုမာရီက မိထွေးတော်ဂေါတမီထေရီ မကြီးကို
ဥပဇ္ဈာယ်ထားပြီး ထေရီမယ်လေး လုပ်ပစ်တယ်။
ဟယ် ........။ ကျုပ်ရင်ထဲ မချိတင်ကဲ ဝေဒနာခံစားပြီး လှိုက်ဖိုရင်မောစွာ ရေရွတ်လိုက်တယ်။ တကယ်ပဲ
ခံစားသွားရတာပါ ။ အဖိုးတန် ပတ္တမြားတစ်လုံး ကောက်ရပြီးမှလွတ်ကျပျော်ဆုံးသလို နှမြောတသသွားရတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျုပ်စိတ်မလျော့ဘူး။ တခြားလူတွေက ထေရီမယ်လေးဖြစ်သွားလို့နောက်တွန့် ကုန်ပေမယ့်
ကျုပ်ကတော့ ဇွဲမလျှော့ဘူး ။ သုဘာကုမာရီကို ဘယ်လိုတွေ့ နိုင်မလဲ......လူသူကင်းတဲ့နေရာမှာ
နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ ရင် ထေရီဘ၀က ထွက်စမ်းပါ........နှစ်ကိုယ်တူ ချစ်ရည်လူးမြူးလိုက်စမ်းပါလို့ 
တောင်းဆိုချင်တယ်။ ဒီအခွင့်အရေး စောင့်နေတာအခုတော့ပေါ်ပြီ ။မြေနီလမ်းလေအတိုင်း
ထမ်းပိုးတစ်ပြန်လောက်သာကြည့်ပြီး လှမ်းလျှောက်လာတဲ့ သုဘာကိုတွေ့ ပြီး ။ သားကောင်လို ချောင်းနေတဲ့
ကျားတစ်ကောက်လို့အချက်ကောင်းတွေ့ တာနဲ့ခုန်အုပ်လိုက်ဖို့ ကျုပ်ပြင်လိုက်ပါတယ် ။ ရှောင်ခါတိမ်း စိမ်းပါနဲ
့လား သုဘာရယ် .......။
" ရာဓ၀ ငါရှေ့ ကဖယ်ပါ "
" နေပါဦး သုဘာရယ် .......ကိုယ်ပြောစမ်းပါရစေ ......အာရုံငါးပါးမှာ အထူးခြားဆုံးဟာ ဖောဋ္ဌဗ္ဗအာရုံတဲ့ သုဘာ
......အကြောပေါင်း တစ်ထောင်စိမ့်သွားအောင် ထူးကဲတဲ့ ဒီအရသာကို မင်းဘာလို့ ပစ်ပစ်ခါခါဖြစ်နေတာလဲ
သုဘာ .....၊ အေးလေ .....အထီးဆိုရင် ဖိုးမသန်းခဲ့တော့ မင်းဒီအရသာကို ဘယ်မှာသိမလဲ .......ဒီမယ်သုဘာ၊
မင်းဟာ ငယ်သေးတယ် ။ အရွယ်ရှိတယ်။ အဆင်းလှတယ် ။
ဒီအရည်အချင်းတွေဟာ လောကီအာရုံကာမဂုဏ်မွေ့ ပျော်ဖို့အကောင်းဆုံးတွေမဟုတ်လား ...............။" ရာဓ၀
သင်ပြောတဲ့ ကာမဂုဏ်တရား အာရုံငါးပါးကို ငါဟာ အနာဂါမိမဂ်နဲ့ ပယ်ဖြတ်ပြီးဖြစ်တယ်..... " " ဘယ်လ
ို....အနာဂါမိမဂ်နဲ့ပယ်သတ်ပြီးပြီ ။ အို ......ကျွတ် ကျွတ် မိုက်လိုက်တာ သုဘာရယ်. ....လောကီအာရုံ
ကာမဂုဏ်တွေစွန့် ပြီး ပျင်းရိငြီးငွေ့ ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဘ၀ကိုဘာကြောင့် များမက်မောနေတာလဲ.......ကာမဂုဏ်ရဲ့
သဘောသဘာဝကို မြည်းစမ်းကြည့်စမ်းပါ ။ ဒီမယ် သုဘာ မင်းကအရွယ်ရှိတယ်။ ကိုယ်က နှပျိုတယ်။
အားကောင်းမောင်းသန် ဒီဘ၀ကို တို့ များနိမဲ့သက်သက် မပျက်စီးစေပါနဲ့ လား...." " တော်တော့ရာဓ၀ ။
သူတော်စင်ကို ယုတ်ညံတဲ့စကားတွေနဲ့မပုတ်ခတ်ပါနဲ့"
သုဘာကုမာရီ ဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ရှောင်ကွင်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ကျုပ်ကလက်ကာထားလိုက်တယ် ။ သူ
့လက်ကိုဆွဲပြီး သူ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်ဖို့ ကြံတယ် ။အနုနည်းနဲ့မရရင်အကြမ်းနည်းနဲ
့လုပ်မယ်။ ကျုပ်အကြံကို ရိပ်စားမိတဲ့ သုဘာက နောက်ကိုဆုတ်ရှောင်လိုက်တယ်။ သုဘာတော်တော်
စိုးရိမ်သွားပုံပါ။ မစိုးရိမ်လို့ လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။ ဘိက္ခုနီမ တစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အသားနဲ
့ထိရင် သိက္ခာပျက်ရော မဟုတ်လား ။ ဒီပညတ်ချက်သိထားတဲ့ ကျုပ်က သုဘာ စိတ်ပျက်အောင်ကြံလိုက်တာပဲ။
" ရာဓ၀ သင်ဘာကြောင့် ဒီလောက်အသည်းအသန်ဖြစ်နေတာလဲ။ နေဦး. ....ရာဓ၀၊ သင်ငါ့ကို
ဘာမက်မောတာလဲ " " ဘာမက်မောလဲ ဟုတ်လား.
ယမင်းရုပ်လေးကို ၊ အချိုးအဆက်ပြေတဲ့ သုဘာကိုယ်လုံးလေးကို
" သင်မှာနေပြီ ရာဓ၀ ။ ဒီခန္ဓာကိုယ် အကောင်ပုပ်က ဘာများမက်မောဖို့ ကောင်းလို့ လဲ ။ ဒီမယ် ရာဓ၀ ၊
သင့်စိတ်ထဲရုပ်သေးစင်ပေါ်က ယမင်းရုပ်လေးကို မြင်ကြည့်စမ်းပါ '' "အင်း....ပြောပါဦး" " သစ်သားရုပ်ကို
ခြေလက်တွေတပ်၊ ဆေးခြယ် ၊ အ၀တ်တွေဆင်ယင်ထားတဲ့ ဒီယမင်းရုပ်ကို အဟုတ်ထင်နေကြတယ်။
ကြိုးလှုပ်ရင် လက်လှုပ်ကတက်တဲ့ ဒီအရုပ်ကို ပွဲပြီးတော့ သေတ္တာထဲ ခေါက်သိမ်းရင် ကြည့်ပါဦးမလား ..........."
"ဟိုက ယမင်းရုပ်၊ သုဘာက ပကတိလူ၊ မတူတာမနှိုင်းပါနဲ့သုဘာရယ် "
"ရာဓ၀၊ ဒီခန္ဓာကိုယ် အကောင်ပုပ်ဟာ အသွေးအား၊ အကြော၊ အရိုး၊ အရေစတဲ့ သုံးဆယ်နှစ် ကောဋ္ဌာသနဲ့ ဖွဲ
့စည်းထားတာပါ ။ တရွေ့ ရွေ့ ပျက်စီးတက်တဲ့ သဘောဆောင်တဲ့ ဒီရုပ်က အိုရမယ် ၊နာရမယ် ၊သေရမယ် "
ိ" အို .....မဟုတ်သေးပါဘူး သုဘာရယ် ။ မအိုသေးခင် အပျိုလေးပင်မဟုတ်လား......မဖြစ်လာသေးတဲ့ ဘ၀ကို
ဖြစ်လာနှိုး၊ ဖြစ်လာနှိုးနဲ့စိုးကြောက်တာ၊ မိုးပြိုမှာ စိုးလို့ခြေထောက်မိုးထောင်အိပ်နေတဲ့ တီတီတွက်ငှက်နဲ့ 
" မိုးကို ခြေနဲ့ ထောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဒီငှက်လေးဟာတခြားငှက်တွေထက်စာရင် အန္တရယ်ကင်းနိုင်တာပဲ ရာဓ၀ ။
ငါဟာ အနိစ္စ ၊ ဒုက္ခ ၊ အနတ္တ တရားကို ခွဲခြားမြင်ထားတော့ မနှစ်သက်အပ်တဲ့ ဒီဘ၀ကို ရွံမုန်းနေပြီ ရာဓ၀ "
ကျုပ်ကို လမ်းပြဆုံးမနေတာ သုဘာကုမာရီကို စိတ်ပျက်မိတာ အမှန်ပါ ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပျက်
လက်လျှော့သွားတယ် ဆိုတဲ့အဖြစ်ကို သုဘာမမြင်စေချင်ဘူး ။ သုဘာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ လည်းနောက်ဆုတ်ဖို
့အကြံ ကျုပ်မှာမရှိဘူး။" ဒီမယ်သုဘာ ၊ ကိုယ်ဟာ နှစ်သက်မြတ်နိုးဖွယ်ရာ အလှတွေကို အကုန်အစင်မြင်နေတယ်
။ မင်းက ဒီအလှတရားမမြင်လို့ သာ ဒီစကားတွေပြောနေတာပါ ။ သုဘာ.......မင်း ကိုယ့်ကို
မယုံဘူးလား.......ကိုယ်ဟာ မိန်းမ တော်တော်များများတွေ့ ဖူးတယ် ။ရင်းနှီးဖူးတယ် ။ သူတို့ တစ်တွေကို
အပျော်သဘောနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပေမယ့် သုဘာကို ဒီလို မကြံစည်တာ အမှန်ပါ။ ဒီမယ် သုဘာ ၊ မင်းကသာ
ကိုယ့်အချစ်ကို လက်ခံတယ်လို့ခေါင်းညိပ်လိုက်စမ်းပါ ။ မင်းလို အင်ဆန္ဒအားလုံး ပြည့်စေရမယ် "
" အို........ရာဓ၀၊ သူတော်စင်ကို ပုတ်ခတ်စကားပြောတဲ့ သင့်မှာအကုသိုလ်များလှပြီ ။ ငါ့ကိုလမ်းဖယ်ပေးပါတော့ "
" အဟက်......ဟက်.......ဟက် ။ မင်းမှာ ရွေးစရာတစ်လမ်းပဲ ရှိတော့တယ် သုဘာ။ အဲဒါ
ငါ့ရင်ခွင်ထဲခိုဝင်ဖို့"
ကျုပ်က ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ရှေ့ ကိုတိုးလိုက်တယ်။ သုဘာတေရီက စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ 
နောက်ကိုဆုတ်လိုက်တယ် ။ ကျွုန်ုပ်အနေနဲ့အခွင့်ကောင်းကို လက်လွတ်ခံလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ သည်တောထဲမှာ
သူ့ ခန္ဓာကို အရယူတော့မယ်။ ၀တ်ရည်သောက်သုံးတဲ့ ပျားပိတုန်းဟာ ပန်းဝတ်ရည်ကို ထပ်ပြန်လဲလဲ
သောက်သုံးသကဲ့သို ကျွန်ုပ်သည်လည်း သုဘာကိုယ်လုံးလေးကို ရယူတော့အံ့လို့ဆုံးဖြတ်လိက်မိတယ်။
" မင်း၊ ဘာပြောချင်လဲ သုဘာ.......ကိုယ့် အလိုဖြည်ဆည်းတော့မလား "
" သင် ခေတ္တ ခဏလောက် စဉ်းစားစမ်းပါ ။ လူ့ သက်တမ်း ဟာတိုတောင်းပါတယ် ။ ကာမဂုဏ်ချမ်းသာ
မက်မောလိုက်စားသူဟာ ဒီအာရုံမတင်းတိမ်ခင်သေရလိမ့်မယ် ။ သေလွန်ပြီးရင် အပါယ်ငရဲမှာ
ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမယ်။ ဒီမယ်ရာဓ၀ သင်ပြောတဲ့ ကာမဂုဏ်အရသာဟာ သင်တုန်းဓါးပေါ်တင်နေတဲ့ ပျားရည်စက်
လျှက်ရတာနဲ့ဘာထူးလဲ........"
" ဘာထူးလဲဟုတ်လား.........ကာမဂုဏ်အရသာဟာ နုပျိုတုန်းခံစားရတဲ့ လောကီချမ်းသာပါ။ ဒီအရသာကို မအို ၊
မနာ ၊ မသေ မီခံစားရမယ် ။ ဘာမှမကြာတဲ့ ဒီကာလမှာ ကာမဂုဏ်အရသာခံစားဖို့ အချိန်ရှိသခိုက်
လုံးလစိုက်ရမယ် သုဘာ............လာပါ ။ ရင်ခွင်ထဲဝင်ခဲ့စမ်းပါ သုဘာရယ်။ "
" သြော်ရာဓ၀ရယ် ......ငါ့မှာ သင်နဲ့ပျော်ပါးလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိဘူး။ ကိလေသာ နွမ်းခြောက်နေတဲ့ ငါ့ကို
ဘယ်ဟာစုံမက်တမ်းတနေတာလဲ " သုဘာကုမာရီ အမေးကြားတော့ ကျွန်ုပ်လှိုက်လှဲစွာ ပြုံးလိုက်သည်။
ထိုအပြုံးမှာ အောင်မြင်ခြင်း သင်္ကေတတွေ ရောယှက်နေတာ သုဘာမြင်ပါလိမ့်မယ်။
" ဘာကို တမ်းတနေလဲဟုတ်လား သုဘာ ......ကိုယ်စွဲလမ်းတာ ကိုယ့်ကို ကြည့်နေတဲ့
မင်းမျက်လုံး။ ၀ိုင်းစက်ကြည်လင်ပြီး ညိုမှောင်နေတဲ့ သုဘာမျက်လုံးက ကိုယ့်ကို ညို
" သြော် .......ဒီမျက်လုံးလား ....ဒီမျက်လုံးကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သင့်ကိုငါပေးပါမယ် ....ရော့ ရာဓ၀ "
" ဟယ် ......အို သုဘာရယ် "
ကလေးတစ်ယောက်လို နားပူ နားဆာလုပ်နေတဲ့ ကျုပ်ကိုစိတ်ပျက်နေတဲ့ သုဘာဟာ ကျွန်ုပ်မတွေးတဲ့ ကိစ္စကို
လျှပ်တစ်ပြက်လုပ်လိုက်တယ်။ လျှင်မြန်လိုက်တာက ကျွန်ုပ်ထားချိန်ပင်မရလိုက်ဘူး။ လှပတဲ့ မင့်မျက်လုံးကို
စွဲမက်တာပါဆိုတဲ့ ကျွန်ုပ်စကားကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်။ သူ့ မျက်လုံးကို
လက်နှိုက်ကော်ထုတ်ယူလိုက်တာပါပဲ။ မျက်ဆန်ထွက်ပြီး ဟောက်ပက်ဖြစ်နေတဲ့ သုဘာမျက်ကွင်းကို
ကျွန်ုပ်ဟာကြောင်ငေးကြည့်နေတယ်။ သွေးတွေ ဟာ မျက်ကွက်ထဲက ယိုစီးကျလာတယ် ။ သူ
" ရော့ ယူလေရာဓ၀ ။ သမင်မျက်လုံးနဲ့ တူတယ်ဆိုတဲ့ ဒီမျက်လုံးကိုယူပါ။ သင့်နှလုံးကို ဆွဲယူဆွတ်ခြွေပြီး
ရမ္မက်ဇောတွေထန်စေတယ်ဆိုတဲ့ ဒီမျက်လုံးကို ယူလိုက်စမ်းပါ ။ ယူလိုက်ပါ ရာဓ၀။ ဘာလဲ ရွံနေပြီလား ။
နာကျင်မူဝေဒနာခံစားရဟန်မတူတဲ့ အမူအရာနဲ့ မျက်လုံးဖောက်ပေးတဲ့ သုဘာကို ငိုင်ကြည့်နေမိတယ်။
ဒီအထိသံယောဇဉ်ပြတ်မှန်း ၊ ကိလေသာစိတ်ခေါင်းပါးမှန်း မသိခဲ့တာအမှန်ပါ။ ကျွနု်ပ်စိတ်ထဲမှာ
သုဘာမျက်လုံးလေးကြည့်ပြီး ရွံရှာတာထက် နှမြောတာ ပိုပါတယ်။ ထိတ်လန့် တာထက်
ဂရုဏာသက်တာပိုပါတယ် ။ သုဘာသာ ဒီလိုလုပ်မယ်ထင်ရင် ကျွန်ုပ်ဒီစကားတွေ ပြောမိမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်ဟာ ၀မ်းနည်းဆို့ နစ်တဲ့ အသံနဲ့ ပြောရင်း သုဘာကုမာရီထေရီမ ရှေ့ မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။
သုဘာရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားသွားတာကြောင့် လက်နှစ်ဖက်ယှက်ပြီး ရှိခိုးလိုက်မိတယ် ။
............... သုဘာရယ် ...........
" ကျုပ်ရဲ့ မိုက်မဲမူ၊ မလိမ္မာမူ အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ သုဘာ "
ကျွန်ုပ် နှုတ်ဖျားက ဒီစကားပဲထွက်လာပါတယ် ။ မှန်တာပြောရရင် သုဘာထေရီမ ခြေဖ၀ါးကို နဖူးနဲ့ တိုက်
ဦးခိုက်ချင်တယ်။ တောင်းပန်စကားတွေ အမြောက်အများပြောချင်တယ် ။ ကျွန်ုပ် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့
ပြစ်မူအတွက်အပါယ်ငရဲကျမှာကို မစိုးရိမ်ဘူး။ သုဘာထေရီမရဲ့ ခွင့်မလွှတ်နိုင်မှာကို စိုးရိမ်မိတယ်။ ကြောက်ရွံ
ကျွန်ုပ်ဟာ တဒင်္ဂအတွင်းမှာပဲ သတိသံဝေဂ ရစရာတွေ ပေးလာတယ်။ တစ်ချိန်လုံးတရားပြဆုံးမခဲ့စဉ်က
တရားမရဘဲ ခုမှနောင်တာရမိတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါ ........ ခွင့်လွှတ်ပါဆိုတဲ့ စကားကိုသာ ထပ်မနားပြောနေမိတယ်။
" အို ....ရာဓ၀ ။ငါကိုဆဲရေးပါစေ။ ငါ့ကို ရှိခိုးသူနှယ်သဘောထားနိုင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ သူတော်စင်တို့ ရဲ့
စိတ်ထားပါ ရာဓ၀။ သင့်ပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ " " ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သုဘာထေရီ " " အင်း ....အခုတော့
သင်သိပြီမို့လား ....သစ်သားရုပ်ကို ခေါင်း၊ ခြေ၊ လက်တွေဖြုတ်ရင် နှစ်သက်စရာမရှိသလို
ဟောဒီသုံးဆယ်နှစ်န၏ကောဋ္ဌာသနဲ့ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ ဒီခန္ဓာဟာ တစ်ခုခု ဖယ်ထုတ်ရင် နှစ်သက်စရာမမြင်၊
ရွံရှာဖွယ်သာ ဧကန်ဖြစ်တယ် ဆိုတာသိပြီမို့ လား "
" မြင်ပါ၊ သိပါပြီ သုဘာထေရီမ "
" ဒါဆို ငါ့ကိုသွားခွင့်ပြုတော့ "
သုဘာထေရီမသည် ညင်သာစကားနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တယ် ။ သည်တစ်ခါမှာတော့ ကျွန်ုပ်ဟာ အရှင်မကို
ပိတ်ဆီးကာထားဖို့မကြိုးစားတော့ဘူး ။ တရိုတသေ လမ်းဖယ်ပေးရင်း ဦးခိုက်လိုက်ပါတယ်။ ကုမာရီထေရီမကို
ကြည့်ရင်းကျွန်ုပ်ဟာ နောင်တမျက်ရည်တွေကျလို့ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 1:44 AM0comments
Labels: ဇီဝက မ၀ိနိကာ သုဘာထေရီမ အပါဒါန်ကိုမှီပါသည်။ မောင်ဆန္ဓ( လယ်ဝေး)
ထားဝယ်မြေ သာပေစွ လို့ 
* မြောက် ဘက်ကို မျှော်ငေးတော့
အရှေ့ ဘက် သူတို့ နယ်
* ရာဘာပင် အတွင်စိုက်လို
မြေပြင် ရေပြင် မလပ်အောင်
ကြိုးတက် သူများ ။
* မြို့ ထားဝယ် နယ်တစ်ဝှမ်းမှာဖြင့်
ရှင်ကိုးရှင် ဘုရားမြတ်တို့ 
သည်ရေနဲ့သည်မြေ၀ယ်
တင့်တယ် အလှ ရှုမငြီး။
"ရှင်တောက်ထိန်"်ိ "ရှင်ဥသြ" ရယ်နဲ့ 
သာမောဖွယ် " ရှင်မျှော်တောင် " သို့ 
"ရှင်ပင်ခရု" " ရှင်တောင့်ပုံ"တဲ့
ကြည်နူးဖွယ်"ရှင်ဆံတော် " မှ
ရှိကော်ရော် "ရှင်ဓာတ်ဝဲ"ဆီသို့ 
" မြတ်ရှင်မှတ္တီး "။
* ထားဝယ်သူ ၊ ထားဝယ်သားတို့ 
"စားရှဉ်ဟာ စားဂေ့ဇို့ 
သွားရှဉ်ဟာ သွားဂေ့ဇို့ "
ငါးပိ ငါးခြောက် ပေါပြည့်ကြွယ်
သီးချင်း ကဗျာသီ အလွမ်းမိုး ဖျန်းဖွယ်ပ
ချစ်ပန်းနွယ် အဖူးအပွင့်တွေနဲ့ 
မြို့ ထားဝယ် အယဉ်ပန်းကိုဖြင့်
နမ်း မွှေးချင်သား။ ။
စားရှဉ်ယာစားဂေ့ဇို့= စားချင်ရာ စားရအောင်
သွားရှဉ်ယာသွားဂေ့ဇို့= သွားချင်ရာ သွားရအောင်
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 12:02 AM0comments
Labels: မြင်းမူမောင်နိုင်မိုး ရေးတဲ့ ကဗျာပါ
၁- ည၈နာရီနောက်ပိုင်း ဘာမှမစားပါနဲ့ တော့ ။စားခဲ့ပြီးတဲ့ညနေစာကလည်း တအားကြီးစားတာမျိုးမဟုတ်ဘ
အိပ်ပျော်မူကို အားပေးတဲ့ သကြားနဲ့ကစီဓာတ်ပါတဲ့ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ဒြပ်ပေါင်း အစားအစာမျိုးကိုပဲ စားဖို
၂- အိပ်ရာမ၀င်ခင် ၄နာရီအတွင်းမှာစိတ်ရောကိုယ်ရောပါ ပင်ပန်းစေမယ့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်
၃- ကဖိန်း(Caffeine )ဓါတ်ပါတဲ့ကော်ဖီကို တစ်နေကုန်သောက်နေပေမယ့် ညနေ ၄နာရီနောက်ပိုင်းမှာ
၄- ည ၉နာရီ၊ ၁၀နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ အိပ်ချင်လာရင် ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ တော့။ အိပ်ပစ်လိုက်ပါ ။
၅- အိပ်ရာဆိုတာ အိပ်ဖို့ အတွက်၊ နှစ်ကိုယ်တူယှဉ်တွဲဖို့ အတွက်ပါပဲ ။ ဒါကြောင့် အိပ်ရာပေါ်မှာ
အစာလည်းမစားနဲ့ ။ကွန်ပြူတာအသေး(Laptop)လေးလဲ မယူသွားနဲ့ ။အခြားအလုပ်လုပ်ဖို
့လည်းမစဉ်းစားပါနဲ့ အိပ်ဖို့ သက်သက်ပါပဲ။
၆- အိပ်ချိန်မှာ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမူကို ဖန်တီးထားပါ။သူရဲ ၊ တစ္ဆေ၀တ္တုဖတ်တာမျိုး ၊ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ VCD
၇- မအိပ်ခင်မှာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်း အေးချမ်းငြိမ်သက်ပြီး နားနေစရာကောင်းဖို
၈- အိပ်ရာနံဘေးမှာ ပန်းချီကားချိတ်ရင်လည်း အရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့ သိမ်မွေ့ နက်နဲတဲ့ ပန်းချီကားမျိုးပဲ
။ဒီဇိုင်း ခပ်ဆန်းဆန်း ၊ခပ်ရှုပ်ရှုပ် အရောင်ကလည်း တောက်ပနေတဲ့ ပန်းချီကားဆိုရင်တော့
၉- အိပ်ရာဝင်ရင် ၀တ်တဲ့အ၀တ်ဟာ ကိုယ်နဲ့ သက်သက်သာသာ ၊ချောင်ချောင်ချီချီ ရှိ ၊ မရှိ သတိထားရမယ်
။ချည်အပျော့စားနဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့ အ၀က်ကို ၀တ်အိပ်ရင် အသက်ရှုရတာရော ၊အသားနဲ့ 
ထိကပ်နေတာရောဟာ သက်သောင့်သက်သာ ရှိတယ်၊ ည၀တ်ဂါဝန် အရှည်ကြီး ၀တ်အိပ်ရင်တော့
လှတယ်ဆိုပေမယ့် မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးတာတို့ ၊ တွန့် လိမ်ကြေမွတာဖြစ်နေရင်
၁၀- တချို့ ကမအိပ်ခင်နှိပ်တာတို့ ၊ ပူနွေးတဲ့အရည်တစ်ခုခုသောက်တာတို့ ၊ရေနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးလိုက်တာတို
့ဟာ ပိုပြီးအိပ်ပျော်စေတယ်လို့ ဆိုတယ်နော် ၊ အချို့ သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေကတော့ ဒါကို
။နှိပ်တာ ရေချိုးတာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ တချို့ ကအကြောအခြင်လျှော့ပြေစေတဲ့ ရေမွှေနံ့ သာဆီတွေနဲ့ 
လိမ်းကျံနှိပ်နယ် ရေချိုးတက်ကြတယ်။ တချို့ ကလည်း အထူးစီမံဖော်စပ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီးတံဆိပ်
့ သာဆီတွေကို သုံးကြသေးတယ်။ ဒါတွေက အိပ်ပျော်အောင် အထူးစီမံဖော်စပ်ထားတာပါတဲ့။
၁၁- သင်ဟာ အသံကြောင့် အအိပ်ဆက်တက်ပါသလား။ အဲဒါဆိုရင် အသံဗလံတွေကို ယဉ်လာဖို
့ လေ့ကျင့်ယူရမယ်။ လေတိုက်တဲ့အသံဟာ ထူးထူးခြားခြား အသံမဟုတ်ပေမယ့် ကားသံလူသံတွေကို
ဖုံးလွှမ်းသွားတက်တယ်။ (ကြိုက်တက်ရင်) ညင်ညင်သာသာရှိတဲ့ ကလေးချော့သီးချင်းမျိုးလို
သီးချင်းစီဒီဓါတ်ပြားဖွင့် နားထောင်ရင်းအိပ်လိုက်ပေါ့ ။
၁၂- တကယ်လို့ကိုယ့်အိပ်ခန်းအပြင်က မီးအလင်းရောင်ဟာ ကိုယ့်အခန်းကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေရင်
ခန်းဆီးထူထူနဲ့ကာရင်ကာ၊ မျက်လုံးကာအဖုံးလေး(Sleep Mask)နဲ့ အိပ်ပါ။
၁၃- ကိုယ်မြတ်နိုးနှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခု၊ အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်ရဲ့ အနံ့ အသက် ၊ အထိအတွေ့ သို့ မဟုတ်
အသံလေးတစ်ခုခုကို ရှူနေ၊ ထိနေ၊ ကြားနေရမှ အိပ်ပျော်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ အရုပ် သို့ မဟုတ် ပစ္စည်ကို
အိပ်ရာဆီယူသွားပါ။ ( မောင်.........မောင် တမောင်မောင်နဲ့သိပ်ခေါ်ရမှ အိပ်ပျော်မယ့် အဖြစ်မျိုး ဆိုတဲ့
၁၄- ကြောင်၊ ခွေး စတဲ့ အိပ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ ချစ်ဖို့ ကောင်းသလောက် လူအိပ်တဲ့နေရာမှာတော့
တော်တော်လေးကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးအဖြစ် အဲဒီ
တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာဒေါသထွက်လာရင် လူတွေကို တော်တော်ကသိကအောက်ဖြစ်စေတက်ပြီး သူတို
့ ရဲ့ကိုယ်က အမွေးအမျှင်တွေဟာလည်း လူအတော်တော်များများကို (Allergic)ဖြစ်စေတက်လို့ မနှစ်မြို
၁၅- နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ အိပ်ခန်းထဲမှာ မကောင်းတဲ့အနံ့အသက်( ဥပမာ-မှိုနံ့ ၊ သိုးနံ့ နဲ့ ဖုန်နံ
့ )တွေရှိရင်တော့ အိပ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလေသန့် စင်စက်ရဲ့ တ၀ီဝီမြည်သံလေးကပဲ
ဆူညံသံတွေကို ဖုံးလွှမ်းပေးသွားတက်ပြီး အိပ်ကောင်းခြင်းကို မိတ်ဆွေရောက်ပါလိမ့်မယ် ။ ။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 9:59 PM0comments
Labels: ဇာနည်ရဲမြင့်( သွား၊ဆေး)
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 1:36 AM0comments
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 5:22 AM0comments
Labels: အလွမ်းပြေ ထားဝယ်သို့